Amehlo Yellow kubantu: imbangela izimpawu amehlo ophuzi
Amehlo hhayi kuphela tikhombisa kwangaphakathi yomuntu, kodwa futhi bamele ukukhanya yemvelo, sibonga ngalo kungenzeka ukuba sithole isimo jikelele zomzimba. Uma abamhlophe kancane kancane ukushintsha umbala, kubonisa khona isifo esithile. Kuyaphawuleka ukuthi ezinye izifo kungabangela umuntu umonakalo eqinile hhayi kuphela, kodwa futhi ukuba ukuthuthukiswa izinqubo engelapheki. Ngakho-ke kubalulekile ukuxilonga izifo futhi baqala ukwelashwa. Kungani emehlweni abantu ophuzi? Kunalokho kungadalwa?
amehlo Yellow kubantu: Izimbangela
Abantu abaningi baye baqaphela lezi zinguquko, musa ugijimele ukusizwa abanekhono kakhulu. Ngempela, iningi ukholelwa ukuthi amaprotheni ophuzi - lokhu akukona isizathu sokukhathazeka. Ngaphezu kwalokho, lezi zinguquko musa kubangele ukungakhululeki. Umuntu nale nkinga bangase bazizwe okuhle. Nokho, ukuphazamiseka umzimba ingabe zenzeka. Ngisho uma liqhathaniswa nendawo ku amaprotheni kungase kubonise ukuthuthukiswa izifo ezithile.
amehlo Yellow sendoda - uphawu izinhlungu zokugula okungathí sina. Ngokuvamile, lokhu uphawu kwenzeka uma:
Kunezinhlobo ezihlukahlukene izifo.
ukusha kwesibindi kohlobo okunobuthi.
Izinkinga ezihambisana ngeziteshi biliary.
Izimila zombili izinhlobo ingozi nesibulalayo.
Kukhona ophuzi wamehlo kubantu. Leli akulona egunjini lokuhlolwa kwezifo. Nokho, uma amaprotheni womuntu ukushintsha umbala walo, into yokuqala kufanele kube ukuxhumana ochwepheshe. udokotela kuphela kungacacisa ukuthi imbangela eyinhloko zalezi zinkinga.
Imiphumela yaloku kuhlola okungenhla of onguchwepheshe angakwazi ukubeka kuphela ngemva ahlolwe kahle emzimbeni wesiguli. Kwezinye izimo, lezi zinguquko akuzona egunjini lokuhlolwa kwezifo. amehlo Yellow, umuntu angase abe isici esingokwemvelo.
Inkinga iba ngaphakathi emzimbeni
Kungani uba emehlweni ophuzi kubantu? Izimpawu izinguquko ezifanayo nganoma yisiphi isifo, ngokuvamile okufanayo. Ngokuvamile, amehlo abe phuzi ngo-abantu ibonisa ukungasebenzi kwesibindi. Phela, lesi sitho owenza emzimbeni eziningi imisebenzi ebalulekile. Ngezinye ukwehluleka emsebenzini wakhe zidinga ukwelashwa sina. Tightening futhi sibe sibi isimo sabo akudingekile e zinkinga. Phela, isibindi kuqinisekisa ukusebenza wonke umzimba.
amehlo Yellow sendoda - uphawu izifo ezifana ezingemnandi like kwesibindi. Ngokuvamile, uphawu kwenzeka uma ukugula iqembu A. Ngo-hepatitis ngokuvamile kwakheka izindawo ezihlala esikhumbeni. Kwezinye izimo kukhona shintsho oluphelele kulobo kube nombala wako.
Futhi lokhu kwenza umbala obomvana amaprotheni kungathinta khona izimpethu esibindini kanye nezinambuzane. Lokhu kuholela ezifweni ezifana simila hydatid, opistorhoz nokunye.
Ngo ezisanda kuzalwa, futhi ngokuvamile kuba khona ushintsho umbala amaprotheni. lokhu kwenzeka ngenxa yalokho? Isizathu esiyinhloko itholakala lokuthi ukuthi ngisho esibelethweni, igazi womntwana elicwile amangqamuzana abomvu egazi. Emva kokuzalwa imvuthu kancane kancane baqala iba yingxenye yomhlabathi. Ngemva 10 - 14 izinsuku luhlaza amaprotheni ayibhampise emuva.
Ukushintsha kwe-tint amaprotheni kwenzeka nabathile izifo ocular. Lokhu kumele kufake:
izifo ezifana pinguecula eba ngenxa yokuphazamiseka lipid umzimba. Ngenxa yalokhu, kuba Wen ophuzi. Mayelana nesifo ezifana pterygium, kuba uhlobo conjunctivitis esithinta bakha ingxenye enkulu yabamemezeli iso. Uma lesi sifo ukusebenzisa, lo muntu angase sikhohlwe yakhe.
Kungani kwezinye izifo babe amehlo abe phuzi ngo-abantu? isithombe ngenhla kubonisa lesi simanga. Kubukeka scary. Ngokuvamile, izinguquko zenzeka izifo ezifana ne-melanoma, noma conjunctivitis kokuba imvelo oncological.
Kuyaphawuleka ukuthi lesi sifo ezingavamile kakhulu. Lesi sifo kunzima kakhulu ukuthola ukuxilonga. Londoloza isiguli kungaba ukwelashwa esifike ngesikhathi.
A owandile onganembile
Kukhona izifo eziningi Ungashintsha umbala amaprotheni iso. Abanye abantu bakholelwa ukuthi isimangaliso esifanayo kungenzeka kungenxa yokubhema. Nokho, lokhu kuyadukisa. Yiqiniso, ukubhema kuyingozi futhi iyingozi somkhuba impilo. Umbala abamhlophe samehlo ayiphazamiseki.
Ngokuvamile, imbangela izinguquko izifo ezifihliwe noma Ukudla okungalungile. Ngakho-ke, ku yellowing wamaprotheni akuyona kuphela ukufuna usizo, kodwa futhi ukuba bayihlole kabusha ukudla kwayo.
Ungafaki kusukela ekudleni ukudla okunosawoti.
Zikhiphe ohlwini ngofulawa ethosiwe.
Beka umkhawulo ukusetshenziswa uphuzo oludakayo.
Faka ukudla yakho Ukudla aqukethe esiningi vitamin C
umkhuba wami wansuku zonke
iholide Okubalulekile. imithwalo esindayo emehlweni zingabangela nezinguquko umbala amaprotheni, kanye ukuthuthukiswa izifo ezithile. Izizathu zalokhu mkhuba miningi. Phakathi kwabo:
Ukufunda esimweni ngezisu ukukhanya ongaphakeme.
umsebenzi Nsuku zonke ngo-laptop noma ikhompyutha.
Ukuswelakala kokusebenza ngokuhlanganyela ukuphumula evamile kungaholela hhayi kuphela yoshintsho umbala amaprotheni, kodwa futhi ukuba awaboni kahle. Kungenxa yalesi sizathu, ochwepheshe batusa: Ngokuvamile ukuhamba emoyeni opholile, ukuthatha ikhefu emsebenzini, ukwenza umzimba elula.
izenzakalo ezinjalo azizintsha neze nje iholidi zamehlo, kodwa futhi nokuvimbela izifo eziningi. Ngaphezu kwalokho, ungasebenzisa izindlela ezihlukahlukene ukuze anakekele. Kungenzeka iso amaconsi, ezihlukahlukene lotions nokunye.
Ukuvimbela i-jaundice amaprotheni
Noma yimuphi izinyathelo kunganciphisa ingozi yesifo. Nakekela kuyadingeka futhi umbono wakho. Ukuvimbela ukuthuthukiswa izifo, zidinga:
Lungile, futhi okubaluleke kakhulu, ukudla ukudla okunomsoco. Umuntu kufanele kudla imali enkulu imifino, izithelo ukudla amaprotheni. Kuyinto ukulahla ngibhema, okuthosiwe, okunosawoti, ukudla okunesitashi kanye notshwala.
Ukuhambahamba ngishaywe umoya, okungcono ngaphandle komuzi.
ubuthongo elizolisayo. Umuntu omdala uyakuphumula okungenani amahora angu-8 ngosuku. Uma isiguli umfutho ophansi wegazi, ubuthongo kufanele athathe amahora 9 kuya ku-10.
Uma isikhathi sihamba phambi qapha ikhompyutha, kubalulekile ukwenza amakhefu ezincane.
Kunconywa ukusebenzisa Vitamin izakhiwo.
Uma umbala amaprotheni washintsha ngenxa yokukhathala, kufanele usebenzise amathonsi kanye lotions ukuze izimpawu.
amehlo Yellow e abantu ibonisa isifo ezifihliwe emzimbeni. isifo sokuqalisa is hhayi Kunconywa, njengoba noma yiziphi izinguquko emzimbeni kuhilelani nemiphumela emibi ngendlela efanayo. Ngesikhathi izimpawu zokuqala ukugula ngokushesha kufanele bafune usizo lobuchwepheshe. Udokotela kufanele ukuqhuba ukuxilongwa okujuli-, okubandakanya ukuhlolwa hhayi kuphela ezibukwayo, kodwa futhi ezihlukahlukene ukuhlolwa kwegazi, imisindo ephansi, nokunye.
Izimbangela zesifo sokudangala ezingabantu
Kungani ngiphethwe yikhanda ngemva kokuzivivinya
Snake Ulimi: malformation fashion
Ama-headphone Technics: tinkhulumo, izici, ukubuyekezwa kanye nobufakazi
Gluten-free ubhiya - umonakalo noma bazuze?
Kudepsta ukwelashwa kulesi sibhedlela: ngezibuyekezo nezithombe
Indlela ukudayisa umphefumulo devil? Kungenzeka yini ukuthengisa umphefumulo wakhe kudeveli isifiso?
Ihhotela Cronwell kuyona Sermilia 5 * (iGreece, Halkidiki): ukubuyekezwa, izincazelo, izinombolo kanye nokubuyekeza
"Chloramphenicol": yokusetshenziswa. Drops "Chloramphenicol"
Izinkomba kanye nezinhlobo abangasebenzi. Izinkinga main
Seziqa LG GA B409UEQA - izinga zikagesi ukuze ekhishini
Le filimu "Young futhi Beautiful": abalingisi, isakhiwo, isakhiwana Izibuyekezo
Croton, nemisayipuresi, Syngonium: ukunakekelwa ekhaya